Hevitra MPANOHARIANA | Ankapobeny | 6
Teny anglisy ianarana
2017-11-28 @ 21:05 in Ankapobeny
Miditra amin'ny taimbava manaraka indray amin'ity volana ity. Teny am-pandehanana nankaty amin'itony toerana vahiny itony moa dia nandray fiaramanidina ny tena. Niainga avy tao Ivato nankao Maorisy ihany ny ekipan'ireny zotram-piaramanidina ireny no miresaka aminao amin'ny teny frantsay fa vao zotra niainga nankao Maorisy nankao Dubai dia tsy mahalala afa-tsy teny Arabo sy teny Anglisy ireny ekipa ireny miteny amin'ny mpandeha. Dia ahoana izany raha tsy mahay ireo teny roa voasoratra ireo? Raha miangavy ianao dia mety hahay hamaly amin'ny teny frantsay ihany ny sasantsasany amin'izy ireny. Efa manambola moa ny mpiteny arabo ka dia zony ny manao izay tiany atao amin'ny orinasa ananany, na dia mety tsy hahatratra ny ampahaefany amin'ny mpandeha aza ny miteny arabo dia efa mahazo tombondalana aloha ry zareo fa mahazo izay lazaina.
Mahita izany toe-javatra izany dia efa iaraha-mahalala ny fihazakazahantsika ray aman-dreny mandefa ny zanatsika any amin'ny sekoly miteny frantsay. Na dia mpandala ny teny malagasy aza aho dia "manaiky tsy fidiny" ny hampiana-janaka amin'ireny toerana ireny. Tahaka ny hoe mihidy aman-trano raha vao teny malagasy no ampianarina ny zaza vao miditra amin'ny teny frantsay, fa ny fandalako ny teny malagasy tsy midika velively fa hotsipahako ny fampianarana ny zanako teny frantsay, fa ny tena tsara, raha mbola azo atao ihany koa dia ny mampianatra teny anglisy ny zaza sady mampianatra azy araka ny tokony ho izy. Mitanila fotsiny ny varavaram-pisokafana raha teny frantsay no haintsika fa misokatra tsara kosa raha teny anglisy no ianarana, fa rehefa sehatra iraisampirenena dia ny teny anglisy ihany aloha no ifandraisan'ny olona voalohany. Na mety tsy hisy anglisy aza ao amin'ilay toerana rehefa misy mpiteny anglisy ao dia mirona mankany ho azy ny fitenenana io teny iramisampirenena io.
Ny vato misakana amin'io fampiasana ny teny anglisy io anefa dia ny fomba fampianarana ilay teny. Mety mahalala voambolana maro isika fa rehefa tsy eo ny lantom-peo dia sahirana hatrany ny mpihaino amin'izay lazaina rehefa tsy mifanaraka loatra amin'io lantom-peo io ny ilazanao azy. Be anefa ireo lazaina ho mpampianatra teny anglisy (indrindra fa ny eny amin'ny sekolim-panjakana) amin'izao fotoana izao no mbola manana olana ihany amin'io teny io eo amin'ny lantom-peo ilazana azy. Rehefa atao zany ny mampianatra ilay teny iraisampirenena dia tsy ilay teny sy ny vombaolana ihany no mahamaika fa ilaina dia ilaina ny mampianatra ny ankizy hiteny lavalava amin'ny lohahevitra iray na maromaro dia mba mety tsy ho sahirana isika amin'ny fitenenana azy haingana sy tsy dia misy diso loatra. Mbola lavitra ny fanamperana aho raha amin'ny fitenenana teny anglisy fa na izany aza rehefa hampiana-tena na hampiana-janaka hiteny ka misokatra amin'ny hafa dia ny teny anglisy no tsara ianarana voalohany.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 38 39 40 Manaraka»